Kafe (fisotro) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Kafe)
Ny kafe dia zava-pisotro voaomana avy amin' ny voan-kafe nendasina sy nototoina ary nalona anaty rano sy notantavanina.
Ny hazo kafe dia maitso maitso, hazo kely na kirihitra, izay maniry amin'ny faritry ny toetr'andro tropikaly. Ny hazo kafe dia amboarina fohy mba hitehirizana ny heriny sy ny fanampiana amin'ny fijinjana nefa afaka mitombo hatramin'ny 30 metatra ny haavony. Ny hazo tsirairay dia rakotra ravina maitso sy waxy maniry mifanohitra tsiroaroa. Ny tsaramaso kafe dia tena tsy tsaramaso, izy ireo no lavaka nesorina tamin'ny serizy kafe. Ny kafe dia fanentanana voajanahary mamorona fiankinan-doha malemy ary mifandray amin'ny tombontsoa ara-pahasalamana maro. Na izany aza, ny fanararaotana kafe dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana maro.
Ny famokarana sy fanafarana kafeHanova
Efa tany amin’ ny taonjato faha-7 tal. J.K. no nambolen’ ny olona ny kafe, izay vanimpotoana namokarana azy tany Arabia, teny amoron’ ny Ranomasina Mena. Nanomboka tamin’ ny taonjato faha-15 dia niitatra nankany Iemena ny fambolena kafe, avy eo nankany amin’ ny Atsinanana manontolo eto amin’ izao tontolo izao.
Voan-kafe matoy eny am-potony
Ankehitriny dia i Brezily no lohalaharana amin’ ny fambolena kafe ao Amerika Atsimo sy manerana izao tontolo izao, nefa niely aty Afrika koa izany nandritra ny taonjato faha-20, ka i Madagasikara no lohalaharana taty Afrika, izay narakarahin’ i Kôngô sy i Kamerona ary i Angôla. Tonga tany Azia koa ny fambolena kafe, na dia tsy tena mandroso be aza, toy ny any Indônezia.
Ny mpamokatra kafe voalohany dia i Brezily, manaraka azy i Kôlômbia, i Indônezia, i Japana, i Kôtidivoara, i Meksika, i Goatemala, i Oganda ary i Etiôpia. Ny ankabetsahan’ ny kafe vokarina maneran-tany dia avy any Amerika, ka ny kafe arabica no vokariny amin’ izany. I Brezily sy i Kôlômbia sy i Indônezia ary i Kôtidivoara no firenena voalohany manondrana kafe be indrindra, ary ireo firenena any Eorôpa Avaratra (Nôrvezy, Danemarka, …) sy ny ao Eorôpa Andrefana ary i Etazonia no mpanafatra kafe be indrindra maneran-tany.
Karazan-kafe sy fikarakarany ny voan-kafeHanova
Maro karazana ny kafe raha isaina ny kafe dia, fa karazany roa ihany no tebna be mpamboly, izay avy aty Afrika: ny kafe arabica (Coffea arabica) sy ny kafe robusta (Coffea canephora (robusta)). Ny kafe arabica dia avy any Etiôpia ary volena indrindra any Amerika Latina. Ny kafe robusta dia volena indrindra aty Afrika, indrindra ao Kôtidivoara, sy any Atsinanana Indrindra, indrindra ao Vietinamy.
Voan-kafe avy nendasina
Rehefa lehibe ny foto-kafe dia mamony miloko fotsy sy mamoa miloko mena izay misy voany roa. Otazana mbola manta ny voan-kafe. Alona anaty rano halemy ny voan-kafe avy eo esorina ny hodiny, ary aotrika avy eo sasana vao izay atapy masoandro na amin’ny toerana mamokatra hafanana. Sivanina amin’ izay ny voan-kafe avy natapy, angonina arakaraka ny habeny anaty lasaka. Voan-kafe manta 20 kg no ahazoana kafe avy nendasina milanja1,5 kg. Ny fanendasana no miteraka ny fofo-manitry ny kafe.
↑ Types of Coffee
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kafe_(fisotro)&oldid=1039129"
Dernière modification le 19 Oktobra 2021, à 07:06
Voaova farany tamin'ny 19 Oktobra 2021 amin'ny 07:06 ity pejy ity.